Caadi ahaan, waxaan inta badan la kulannaa xaaladda in shaashadda taleefanka gacanta uu shil ku jabo, kiisaska qaarkood waa jabaan dabool muraayad ah, qaarna shaashadda gudaha ma muujiyaan sidoo kale waa la jebiyey. Dayactirka dhinac saddexaad wuxuu guud ahaan ku weydiin doonaa inaad rabto midka asalka ah ama midka caadiga ah. Gen ...
BPM Era Marka laga hadlayo badeecadan, dadka qaar waa inay arkeen. Xaqiiqdii, si adag markaan u hadlo, sheygan lama wici karo taleefanka gacanta. Qalabkani wuxuu markiisii ​​ugu horreysay soo muuqday qarnigii 20-aad, markii Shanghai ay ahayd magaaladii ugu horreysay ee furta saldhigyada shaashadda. Intaa kadib, qalabka BP wuxuu si rasmi ah u galay ...
Cabbirku had iyo jeer wuxuu ahaa jihada muhiimka ah ee horumarinta shaashadda taleefanka gacanta, laakiin taleefanka gacanta oo in kabadan 6.5 inji ah kuma haboona hal gacan qabasho. Sidaa darteed, ma aha wax adag in la sii wado ballaadhinta cabirka shaashadda, laakiin inta badan noocyada taleefannada gacanta ayaa bixiyay ...
Aan ku waydiiyo horta su'aasha Taleefanka gacanta badanaa waxaa la saaraa miiska marka aan la isticmaalin, shaashadda ma kor baad u dhigaysaa mise shaashadda? Laakiin waad ogtahay waxa? Telefoonka gacanta dusha saar miiska dusha shaashadda. Waad ogaan doontaa sababta ka dib markaad aqriso waxyaabaha soo socda? Saddex faa'iido oo ka mid ah ...